Hirshabeelle oo ka hadashay buuqii hareeyay doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Hirshabeelle oo ka hadashay buuqii hareeyay doorashada
Siraaji Sheekh Isxaaq, oo ah guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Hirshabelle ayaa sheegay in doorashadu ay sii soconeyso, guddiga anshaxana loo gudbiyay dacwad ka dhan ah xildhibaanadii buuqa ka abuuray hoolka doorashadu ka socotay.
JOWHAR, Soomaaliya- Kursigii labaad ee xalay lagu dooranaayay Jowhar ayaa hareeyay buuq iyo rabshado ku sigtay inay isku beddelaan gacan ka hadal.
Afar musharrax oo ku tartamaayay kursigan oo mid kamid ah tahay haweeney ayaa markii tirinta wareeggii koowaad ay idlaatay, buuq ka bilaabay qaar ka mid ah xildhibaannada Hirshabeelle, taas oo markii dambe keentay in la damiyo nalka hoolka ay ka socotay doorashada.
Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle ayaa tilmaamay inay sii socon doonaan doorashada kuraasta Aqalka Sare ee Hirshabelle.
“Xildhibaanno qeyb ka ah kuwii codeynayay ayaa ku kacay falal anshax xumo ah, dacwad ka dhan ah ayaa loo gudbiyay sharciga oo ah halka lagu kala baxayo, xeer-hoosadka inoo yaalla wixii ku qoran ayaa lagu qaadayaa xildhibannadaas.” ayuu yiri Siraaji Sheekh isxaaq.
Ma jiro wax war ah oo weli kasoo baxay Guddiga doorashada Hirshabeelle oo ku aadan Khilaafka hareeyey kursigii xalay lagu guuldareystay doorashadiis, waxaa kale oo jira mid kamid ah kuraasta harsan doorashadooda oo qaar ka mid ah musharaxiintooda ay isaga tageen magaalada Jowhar iyaga oo saluugsan farogelin lagu hayo kursigii ay u tartami lahaayeen, hayeshee guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa si deg-deg ah ugu yeeray inay dib ugu soo laabtaan deegaan doorashaooda oo ah Hirshabeelle.
Kursiga xalay muranka badan dhaliyay ee lagu kala tagay doorashadiisa ayaa ah mid senatarka laga soo doorto uu kasoo jeedo gobolka Hiiraan.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in fowdada ay bilaabeen xildhibaanno taageersan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed, kaddib markii Musharax Cali Shacbaan uu helay 28 cod, halka musharrax ka socday kooxda Farmaajo oo la yiraahdo Cabdalla Cabdi Xuseen oo kaalinta labaad galay uu helay 30 cod.
Cabduqaadir Xanafi Sheekh Bashiir oo la tilmaamay inuu ahaa Musharax madax bannaan ayaa si lama filaan kuu helay codod gaaraya 36 cod wareeggii koowaad, sidaas ayuu ku noqday musharaxii kaalinta koowaad u galay wareeggii koowaad.
Shan kursi oo ka tirsan Aqalka Sare ayaa lagu soo doortay Jowhar, waxaana ugu dambeeyay Axmed Maxamed Cali Af-cadey, kaas oo ay la tartameen ilaa afar musharrax, oo mid kamid ah is casilay wareegii koowaad ee doorashada, labo kalena ay ku hareen, Af-cadey ayaa helay codad gaaraya 52, halka uu Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan uu ka helay codad gaaraya 44 cod, taas oo ka dhigtay inuu ku soo baxo doorashada Aqalka sare ee Hirshabeelle ku matali doona Dowladda Federalka.
Hirshabeelle ayaa kamid ah meelaha ay sida weyn ugu tashanayeen Farmaajo iyo kooxdiisa, balse hirarka siyaasadeed ee ay wajahayaan ayaan u oggolaan inay gaaraan damacii kaga jiray Hirshabeelle oo maamullada kale tustay taariikh ah in Fahad iyo Farmaajo ay quusiyeen.